मित्रता वा रोमान्स?—भाग १ | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) एस्टोनियन ओरोमो काजाक काजाक (अरबी) किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिभ टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सेत्स्वाना सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
तपाईंलाई विपरीत लिङ्‌गको एक जना व्यक्‍ति असाध्यै मन पर्छ। अनि दुवै जनाले यस्तै सोचिरहेको छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ। हुन पनि तपाईंहरू एक-अर्कालाई मेसेज पठाइरहनुहुन्छ, जमघटहरूमा तपाईंहरू दुई जना छुट्टै कुरा गरिरहनुभएको हुन्छ। . . . अनि उसले पठाएको कुनै-कुनै मेसेज प्रेमको आभास दिने खालका छन्‌।
त्यसैले तपाईंहरू दुई जनाबीचको सम्बन्धबारे पक्का गर्न ऊसित कुरा गर्नुहुन्छ। प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ? “म तिमीलाई साथीको रूपमा मात्र हेर्छु।”
“मलाई असाध्यै रिस उठ्यो—ऊसित अनि आफैसित पनि! हामी हरेक दिन एक-अर्कालाई मेसेज पठाउने गर्थ्यौं र उसले मेरो साँच्चै ख्याल गर्थ्यो। त्यसैले ऊप्रति रोमान्टिक भावना जागेको थियो।”—ज्यास्मिन।
“एक जोडी डेटिङ गर्न जाँदा ऊ र म साथी गइदिन्थ्यौं। कहिलेकाहीं त त्यो जोडीले मात्र नभई हामीले पनि डेटिङ गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। हामी दुई जना खुब कुराकानी गर्थ्यौं, अनि एकपछि अर्को मेसेज पठाउने गर्थ्यौं। उसले मलाई साथी मात्र बनाएको हो भन्दा अनि उसको अर्कै केटासित डेटिङ चलिरहेको छ भनेर थाह पाउँदा सहनै सकिनँ।”—रिचर्ड।
“एक जना केटाले मलाई दिनहुँ मेसेज पठाउँथ्यो अनि कहिलेकाहीं त हामी दुवै जना रोमान्टिक मेसेजहरू पठाउने गर्थ्यौं। मैले उसलाई आफ्नो भावना पोखाएँ तर उसले हाँस्दै यसो भन्यो, ‘म अहिले कसैसित पनि डेटिङ गर्न चाहन्‍नँ!’ म धेरै समयसम्म रोइरहें।”—तमारा।
निष्कर्ष: तपाईं आफूहरूबीच रोमान्स चलिरहेको छ भन्‍ने महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो रोमान्स एकतर्फी रहेछ भनेर बुझ्दा रिस उठ्‌नु, अपमानित र धोका पाएको महसुस गर्नु नौलो कुरो होइन। स्टेभन नाम गरेका युवा यसो भन्छन्‌, “मलाई त्यस्तो हुँदा मन छियाछिया भयो, मेरो भावनामा गहिरो चोट पुग्यो। त्यसपछि अरूमाथि भरोसा गर्न गाह्रो भएको थियो।”
मेसेज आदान-प्रदान गर्दा र सामाजिक सञ्जालमार्फत आपसमा कुराकानी गर्दा तपाईंप्रति रोमान्टिक चासो नभएको व्यक्‍तिसित समेत भावनात्मक रूपमा नजिकिन असाध्यै सजिलो भएको छ। केही युवायुवती के भन्छन्‌, विचार गर्नुहोस्‌।
“कसै-कसैले टाइम पासको लागि मात्र तपाईंलाई मेसेज पठाइरहेका हुन सक्छन्‌ तर तपाईंलाई चाहिं उसले तपाईंप्रति चासो राख्दो रहेछ जस्तो लाग्न सक्छ। अझ उसले दिनका-दिन मेसेज पठायो भने त उसको लागि तपाईं विशेष व्यक्‍ति हो भनेर सोचिरहनुभएको हुन सक्छ, जुन गलत हो।”—जेनिफर।
“एक जनाले रोमान्टिक सम्बन्ध गाँस्न चाहिरहेको हुन सक्छ अनि अर्को व्यक्‍तिले चाहिं कुराकानी गर्ने, उसको आत्मविश्‍वास बढाउन मदत गर्ने साथी मात्र खोजिरहेको हुन सक्छ।”—जेम्स।
“तपाईंले ‘गुड नाइट’ मेसेज मात्र पठाउनुभयो भने पनि बुझ्नेले त्यसलाई रोमान्टिक मेसेजको रूपमा बुझिरहेको हुन सक्छ तर तपाईंले कुनै रोमान्टिक भावना नराखीकनै यस्तो लेख्नुभएको हुन सक्छ।”—हेली।
“मेसेजमा हाँसिरहेको स्टिकर पठाउँदा ‘खुसी व्यक्‍त गरेको’ अथवा ‘जिस्केको’ अर्थ लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीं त्यस्तो मेसेज पाउने व्यक्‍तिले ‘ऊ मसँग जिस्किरहेको छ’ भन्‍ने अड्‌कल काट्‌न सक्छ।”—अलिसिया।
निष्कर्ष: समय दिनु र स्नेह देखाउनु एउटै हो भन्‍ने नठान्‍नुहोस्‌।
तर यो कुरा भन्‍न जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ। बाइबल भन्छ: “मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ, त्यो अति भ्रष्ट हुन्छ।” (यर्मिया १७:९) यसले तपाईंलाई सपनाको महल सजाउन सुऱ्‍याउन सक्छ तर निद्राबाट बिउँझदा त हाता लाग्यो शून्य।
वास्तविकता स्वीकार्नुहोस्‌। एकछिन रोकिएर सम्बन्धबारे विचार गर्नुहोस्‌। आफैलाई सोध्नुहोस्‌, ‘यो व्यक्‍तिले अरूलाई भन्दा मलाई विशेष तरिकामा व्यवहार गर्छ भन्‍ने कुरामा पक्का हुन सक्ने के आधार छ?’ भावनामा बहेर आफ्नो “सोचविचार गर्ने क्षमता”-लाई कमजोर नबनाउनुहोस्‌।—रोमी १२:१.
समझदार हुनुहोस्‌। जुन व्यवहारले गर्दा तपाईं उसको लागि साथी मात्र नभई त्योभन्दा विशेष हुनुहुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ, ती कुरामा मात्र नभई उसले तपाईंलाई साँच्चै कसरी हेरेको छ भन्‍ने कुरामा अझ ध्यान दिनुहोस्‌। तपाईंले कसैलाई जुन नजरले हेर्नुभएको छ, उसले पनि तपाईंलाई त्यही नजरले हेर्छ भन्‍ने छैन।
धैर्य गर्नुहोस्‌। कुनै व्यक्‍तिले तपाईंसित रोमान्टिक सम्बन्ध गाँस्न चाहेको कुरा स्पष्टसँग नबताएसम्म भावनात्मक रूपमा नजिक हुन नखोज्नुहोस्‌।
खुलस्त कुरा गर्नुहोस्‌। बाइबल भन्छ, “बोल्ने एउटा समय” छ। (उपदेशक ३:७) कसैले तपाईंलाई साथीको रूपमा मात्र नहेरी त्योभन्दा विशेष तरिकामा हेरेको हो कि होइन भनेर पक्का हुन चाहनुहुन्छ भने त्यस व्यक्‍तिसित कुरा गर्नुहोस्‌। भ्यालरी नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌, “तपाईंहरूबीचको सम्बन्धलाई दुई जनामध्ये कसैले रोमान्टिक तरिकाले सोचेको छैन भने पछि यो कुरा थाह पाएर ठूलो चोट सहनुभन्दा अहिले सानो चोट सहनु राम्रो हो।”
निष्कर्ष: हितोपदेश ४:२३ मा यसो भनिएको छ: “आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्‌।” कुनै व्यक्‍तिप्रति तपाईं आकर्षित हुनु भएको छ भने त्यो व्यक्‍ति पनि तपाईंप्रति आकर्षित भएको छ या छैन पक्का गर्नुहोस्‌। यसरी पक्का हुनुभन्दा अघि नै रोमान्टिक भावना विकास हुन दिनु भनेको बिरुवालाई कडा चट्टानमा उमार्न खोज्नुजस्तै हो।
त्यो व्यक्‍तिले तपाईंप्रति रोमान्टिक भावना राखेको रहेछ अनि तपाईंको डेटिङ गर्ने उमेर भइसकेको छ भने सम्बन्ध अघि बढाउने या नबढाउने आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। नबिर्सनुहोस्‌, आध्यात्मिक लक्ष्य एउटै भएका अनि आपसमा खुलेर कुराकानी गर्ने र वफादार हुनेहरूको वैवाहिक सम्बन्ध बलियो हुन्छ। (१ कोरिन्थी ७:३९) हो, तिनीहरू पहिले पनि असल मित्र थिए पछिसम्म पनि त्यस्तै रहनेछन्‌।—हितोपदेश ५:१८.
साथीलाई तपाईंले ऊसँग रोमान्टिक सम्बन्ध गाँस्न चाहेको जस्तो लाग्छ कि? यी सुझावहरू विचार गर्नुहोस्‌।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने मित्रता वा रोमान्स?—भाग १: मैले कस्तो सङ्‌केत पाइरहेको छु?